Indima ye-Theorem ye-Bell kwi-Quantum Physics
I-Theorem yeBell yaqulunqwa ngu-Irish physicist John Stewart Bell (1928-1990) njengendlela yokuvavanya ukuba okanye ingekho iincumana ezixhunyaniswe ngokugqithiswa kwe- quantum ukunxibelelana ngolwazi ngokukhawuleza kunokukhawuleza kokukhanya. Ngokukodwa, i-theorem ithi akukho mfundiso yezinto ezifihliweyo zendawo ezingabonakaliyo zingabhalela zonke izibikezelo ze-quantum mechanics. I-Bell ibonisa le ngqungquthela ngokudala ukungalingani kweBell, okubonakaliswa yilingo lokuphulwa kwiinkqubo ze-physics ze-quantum, ngaloo ndlela kubonisa ukuba enye ingcamango entliziyweni yeendawo ezifihliweyo ezikhoyo zimele zikhohlise.
Ipropati edla ngokuthatha ukuwa yiyo ndawo - ingcamango yokuba akukho miphumo yomzimba ehamba ngokukhawuleza kunokukhawuleza kokukhanya .
Kwimeko apho unamaqabunga amabini, A kunye neB, ezixhunyiwe kwi-quantum entanglement, ngoko iipropati ze-A kunye neB ziyahambelana. Ngokomzekelo, ukuhamba kwe-A kungabikho kwe-1/2 kwaye ukuhamba kwe-B kunokuba yi--1/2, okanye ngokulandelelana. I-Quantum physics iyasitshela ukuba kude kube yenziwe umlinganiselo, la maqabunga aphezulu kwiimeko ezinokwenzeka. Uhlobo lwe-A luphakathi kwe-1/2 kunye ne- -1/2. (Jonga i-article yethu kwiCat Schroedinger yeCat ukucinga ngakumbi malunga nale ngcamango. Lo mzekelo othile kunye neengqungquthela A kunye noB ziyingqungquthela ye-Einstein-Podolsky-Rosen, ebizwa ngokuba yi- EPR Paradox .)
Nangona kunjalo, xa ulinganisa u-A, uyazi ngokuqinisekileyo ukubaluleka kwe-B ngaphandle kokuyilinganisa ngqo. (Ukuba i-A ikhuphe i-1/2, ngoko-ke ukuhamba kwe-B kufuneka ibe yi-1/2.
Ukuba i-A iqhubekile -1/2, ke ukuhamba kwe-B kufuneka ibe yi-1/2. Azikho ezinye iindlela.) Isikhwama entliziyweni yeBell's Theorem yindlela leyo nkcazelo ikwaziswa ngayo kwi-particle A ukuya kwi-particle B.
I-Theorem yeBell esebenza
UJohn Stewart Bell ekuqaleni wayecebisa ingcamango yeBell's Theorem kwiphepha lakhe le-1964 " Kwi-Einstein Podolsky Rosen ." Ekuhlalutyweni kwakhe, wathabatha iifomula ezibizwa ngokuba yi-Bell engalinganiyo, eziyizinto ezingabonakaliyo malunga nokuba kaninzi kangakanani ukuhamba kwe-particle A kunye ne-particle B kufuneka zilungelelaniswe kunye nokuba kungenzeka ukuba (ngokuchasene nokuxinwa kwe-quantum).
Ezi ngalingani zeBell ziphulwa ngumvavanyo lwe-quantum physics, oko kuthetha ukuba enye yeengcamango zakhe ezisisiseko zazifanele zibuxoki, kwaye kwakukho iingcamango ezimbini kuphela ezihambelanayo nomthetho-mthetho-nokuba inyaniso okanye indawo yangaphaya yayingaphumeleli.
Ukuqonda oko kuthetha ukuthini, buyela emuva kuvavanyo oluchazwe ngasentla. Ulinganisela i-particle A. Kukho iimeko ezimbini ezinokuba ngumphumo - nokuba i-particle B ngokukhawuleza ine-spin eyahlukileyo, okanye i-particle B isengaphezulu kwiindawo.
Ukuba i-particle B ichaphazeleka ngokukhawuleza ngokulinganisa i-particle A, oko kuthetha ukuba ukuphulwa kweendawo zendawo kuphulwa. Ngamanye amazwi, ngandlela-thile "umyalezo" uvela kwi-particle A ukuya kwi-particle B ngokukhawuleza, nangona ingahlukaniswa ngumgama omkhulu. Oku kuya kuthetha ukuba i-quantum mechanics ibonisa ipropati engekho ndawo.
Ukuba le "myalezo" (okokuthi, engekho ndawo) ayiyenzeki, ke enye yodwa inyulo yile nxalenye yeB isengaphezulu kwiindawo. Umlinganiselo we-particle B ujikeleza kufuneka, ngoko ke, ukuzimelela ngokuzeleyo kwimiqathango ye-particle A, kunye nokungalingani kweBell kubamele ipesenti yexesha apho i-spins ye-A ne-B imele ilandelane kule meko.
Iingcamango ziye zabonisa ngokugqithiseleyo ukuba ukungalingani kweBell kuphulwa. Ukutolika okuqhelekileyo kwesi siphumo kukuba "umyalezo" phakathi kwe-A no-B uhamba ngokukhawuleza. (Eminye iya kuba kukungavumelekanga ukubonakala kwe-B.) Ngoko ke, i-quantum mechanics ibonakala ingabonakali.
Qaphela: Le ndawo engekho ndawo kwimishini ye-quantum ihambelana nolwazi oluthile oludibeneyo phakathi kweengqungquthela ezimbini - uphendule kulo mzekelo ungentla. Umlinganiselo we-A awunakusetyenziswa ukuhambisa ngantoni nawuphi na uhlobo lwazi olunye ulwazi kwi B ebudeni obude, kwaye akukho mntu ogcina uB uya kukwazi ukuxelela ngokuzimeleyo nokuba ingaba A ayilinganisiwe. Ngaphantsi kwesininzi sokutolika ngamagcisa ahloniphekileyo, oku akuvumeli ukuthetha ngokukhawuleza kunokukhawuleza kokukhanya.
I-Bimetallism Inkcazo kunye neMbono Yembali
UMthetho kaHess Definition
Nguwuphi uhlobo loVangeli?